Af Soomaali - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Soomaaliga)
Soomaaliya, Jabuuti, Kiinya, Itoobiya
34 milyan (2019)
Bariga Deegaanad Hoose
Latin (Rasmi), Farta Carabiga, Farta Cismaaniya, Borama, kadariya
Soomaaliya, Somaliland, Dhulka muransan
ka mid ah taxane ku saabsan
Soomaali (Maay Maay)
Af-Soomaali waa luqad Afro-Aasiyatik ah oo ay leedahay laanta Kushiitik . Waxay afka hooyo u tahay Soomaalida ku nool dhulka Soomaaliweyn iyo qurbo joogta Soomaaliyeed. Afk Soomaaliga waa afka rasmiga ee Soomaaliya , luqadda qaranka Jabuuti , iyo luqad ka shaqeeysa gobolka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale Waqooyi Bari Kenya. Afka Soomaaliga wuxuu si rasmi ah ugu qoran yahay xarfaha Laatiinka.
1 Kala sooca
2.1 Luqada rasmiga ah
3 Lahjadaha af Soomaaliga
4 Qoristii Far Soomaaliga
5 Olalihii Horumarinta Reer Miyiga iyo Qoristii Far Soomaaliga.
6 Far Soomaali
7 Tirada Dadka ku hadla Af-Soomaaliga
8 Meelaha lagaga hadlo
9 Sidoo kale fiiri
Afka Soomaaliga waxaa lagu kala soocay gudaha kushitiga ee laanta Afro aasiyatiga; gaar ahaan, Dhulka bariga hoose ee kushitik oo ay weheliso canfarta iyo Saho. Af-Soomaaligu waa luuqadda Kushiitiga ee si fiican loo diiwaangeliyay, oo leh daraasado aqooneed oo afka ah oo ku qootoma dabayaaqadii qarnigii 19aad.
Afka Soomaaliga waxaa ku hadla Soomaalida ku nool dalka Soomaaliya , Jabuuti , Itoobiya , Yemen , Kenya , iyo qurba joogta Soomaalida . Waxaa sidoo kale ku hadlo dad tiro yar oo ka soo jeeda qowmiyadaha tirada yar ee ku sugan agagaarkaas.
Afka Soomaaliga ayaa ah kan labaad ee ugu wayn kushitiga marka laga reebo afka Oromada.
Laga soo bilaabo 2016, waxaa jiray dad gaaraayo ku dhawaad ​​36.6 milyan oo qof oo ku hadla af soomaaliga, oo kala degan dhulka soomaali wayn, taas oo ku dhawaad ​​15 milyan ay ku noolyihiin Soomaaliya . Afka waxaa ku hadla qiyaastii 95% dadka dalka deggan, iyo sidoo kale inta badan dadweynaha Jabuuti.
Ka dib bilowgii Dagaalkii Sokeeye ee Soomaaliya horaantii 1990meeyadii, qurbo-joogta ku hadasha Af-soomaaliga ayaa korortay, iyadoo bulshooyinka cusub ee ururada Soomaalida ay ka samaysmeen qaybo ka mid ah Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika iyo Yurub .
Luqada rasmiga ah
Dastuur ahaan, Af-Soomaaliga iyo Carabiga waa labada af ee rasmiga ka ah Soomaaliya. Af soomaaliga waxay ahayd luuqad rasmi oo qaran tan iyo bishii Janaayo 1973, markii Golaha Kacaanka (SRC) uu ku dhawaaqay inay tahay luqadda koowaad ee maamulka iyo waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya . Afka Soomaaliga ayaa markaas ka dib loo aas aasay inuu yahay luuqadda ugu weyn ee waxbarashada tacliinta ee foomamka 1 illaa 4 , ka dib shaqadii diyaarinta ee ay magacaabeen Guddiga Afka Soomaaliga ee ay dawladdu u magacowday.
Markii dambe waxaa la ballaariyey in lagu daro dhammaan foomamka 12da ah 1979. Sanadkii 1972, golahii kacaanka waxay qaadatay xuruuf laatiini ah oo noqonaayo mid rasmi oo qaran oo badalaayo dhowr xuruuf oo markaa la adeegsan jiray. Sidoo kale, wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka Talyaaniga ee Xiddigta Oktoobar ("Stella d'Ottobre") ayaa dhalasho ahaan loo bixiyay , oo loogu magac daray Xiddigta Oktoobar , waxayna bilaabeen daabacashada af Soomaaliga.
Raadiyaha ee dawladdu maamusho ee Radio Muqdisho ayaa sidoo kale af soomaaliga ku baahinaayay tan iyo 1943. Intaa waxaa dheer, shabakadaha dadweynaha ee gobolka raadiyaasha iyo tv'yada barnaamijyada ee sii daayaan oo ku baxo af soomaaliga.
Afka Soomaaliga waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay luqadda rasmiga ah ee shaqada ee Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. In kasta oo aysan luqada ka ahayn af rasmi ah dalka Jabuuti, haddana waxay halkaas ka dhigtaa luqad qaran oo weyn. Afka Soomaaliga waxaa looga isticmaalaa telefishanka iyo idaacadaha raadiyaha, Raadiyaha ee dawladdu maamusho Raadiyo Jabuuti ayaa barnaamijyada iyo idaacadaha ku sii gudbinaayay luuqadda tan iyo 1943 iyo wixii ka dambeeyay.
Hay'adda Warbaahinta Kenya ayaa iyadana ku hadasha Afka Soomaaliga gaar ahaan barnaamijyadooda Iftin FM. Afsoomali waxaa looga hadlaa Waqooyi Bari Kenya.
Afka Soomaaliga waxaa nidaaminaya Akademiyada Afka Soomaaliga ee Gobolka , oo ah hay'ad dawladeed oo laga asaasay magaalada Jabuuti bishii Juun 2013 , waxa ay wadaagaan dawladaha Jabuuti, Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa si rasmi ah loogu xilsaaray ilaalinta afka soomaaliga.
Laga soo bilaabo 2013, Afka Soomaaligu sidoo kale waa mid ka mid ah luqadaha muuqda ee laga heli karo Google Translate .
Lahjadaha af Soomaaliga
Afka soomaaliga wuxuu u kala baxaa labo qeybood oo waaweyn: Af maxaatiri iyo Af maay. Afka woqooyiga soomaaliga ama af maxaa tiriwaa af Halbeega Soomaaliyeed ee cilmiga iyo culuunta lagu barto ahna kan qoran. waxay aas aaska u noqotaa heerka Soomaaliga. Waxaa ku hadla in ka badan 85% bulshada soomalida oo dhan, gaar ahaan deegaanada Jabuuti , Waqooyiga Soomaaliya, Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya , Waqooyi Bari Kenya iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Lahjada Maay waxaa looga hadlaa inta badan koonfurta soomaaliya qoraalkiisuna weli si rasmi ah layskuguma raacin.
Qoristii Far Soomaaliga
Far Soomaaliga waxaa la qoray Sanadkii 1972-kii. Af soomaaliga waxa lagu qoraa xuruufta laatiinka ka dib 11 sano markii la magacaabay guddigii Af Soomaaliga sanadkii 1961. Dood dheer ka dib, guddigu wuu talo gafay. Dowladii Kacaanka ayaa dib boorka uga jaftay guddiga waxaana muddo 2 sano ah lagu hirgeliay qorista iyo barashada Af Soomaaliga.
18 nooc oo far Soomaali loo damacsanayaa ayaa waxaa soo bandhigay af yaqaano kala duwan. Guddigii Af Soomaaliga ee shaqaynayay 1961 ilaa 1972 ayaa doortay fartii afyaqaan Shire Jaamac Axmed i taas oo horay uu ugu tijaabiyay buugaag, biirayaal bille ah sida "Iftiinka Aqoonta" iyada ay jireen tartan balaaran oo dhanka xaruufta Carabiga ah maadama Soomaalidu Quraanka ku barato Alif, Ba. Xaruufta Laatiinka waxaa loo door biday arimo dhaqaale, qalabkii wadanka yiil iyo asbaabo kale.
Olalihii Horumarinta Reer Miyiga iyo Qoristii Far Soomaaliga.
Olalihii Horumarinta Reer Miyiga ayaa lagu balaariyay tirada bulshada ee taqaan qorista iyo akhrinta Af Soomaaliga.
Barnaamijyo kumanaan saacadood oo ka baxay idaahadaha Radio Hargaisa iyo Radio Mogadishu iyo barayaal 20,000 (labaatan kun) oo ay ku jiraan ardaydii dugsiyada sare ayaa u howl galay in aqoonta aas aaska ee bulshada laga qaado 2% lana gaarsiiyay 55% mar ay UNESCO baaris ku samaysay isbadalka uu ummada gaarsiiyay Ole Olihii Horumarinta Reer Miyiga.
Wakaalada Madbacada Qaranka, Tiyaatarka, Wakaalada Filimida iyo wasaarado badan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka qorista iyo horumarinta Af Soomaaliga .
Af soomaaligu waa af ka kooban erayo,tiraab iyo hawraar soomali ah oo ay kol kolka qaarkood ku darsamaan erayo carabi ama ingriisi ahi. Af Soomaligu waa luqadda ugu fudud qoraal ahaan iyo codeynba hase ahaatee ku hadliddeedu way adagtahay, kolka la barbardhigo afafka udunka qaar ka mida.
B T J X KH D R S SH DH C G F Q K L M N W H Y ama b t j x kh d r s sh dh c g f q k l m n w h y
A E I O U ama a e i o u
AA EE II OO UU ama aa ee ii oo uu
Si la mooda waxaa kale oo jiira falal ku dhamaada "N", kaa oo amar haan marka aan ka soo gano uu ku idlaado "Y" ama "I". Tusaale: xooji(xoojin), sii(siin), beer darey(beer dareyn). Waxaa laga reebaa kuwoo amar ahaan ku dhammaada "OOW", laakiin isu bedesho "AANSHO". Sida: jecloow(jeclaansho), ogoloow(ogolaansho).
Hadii la fiirayo, meelaha ugu fudud waa tirooyinka:
1 Kow = Koowaad
2 Labo = Labaad
3 Saddex = Saddexaad
4 Afar = Afaraad
5 Shan = Shanaad
6 Lix = Lixaad
7 Todobo = Todobaad
8 Sideed = Sideedaad
9 Sagaal = Sagaalaad
10 Toban = Tobanaad
20 Labaatan = Labaatanaad
30 Sodon = Sodonaad
40 Afartan = Afartanaad
50 Konton = Kontonaad
60 Lexdan = Lexdanaad
70 Todbaatan = Todbaatanaad
80 Sideetan = Sideetanad
90 Sagaashan = Sagaashanaad
Waxaa kale oo aan wax ka sheegi karna tilmaameyaasha. Ka soo qaad: kan (kaas), tan (taas), kuwan (kuwaas). Sidoo kale kama maaranno waxyaabaha aan albaab ahaan u balaqeyno (this is a pen) in aan u fasirno afkeena sidii la doono ayadoon ahayn(kan qalin waaye/kan waa qalin)
This = kan
Is = waaye/waa
Pen = qalin
Laakiin (my pen) sideen u isticmaali karaa ma(kan qalin)baa? Jawaabtu waa may ee waa lays daba mariyaa (qalin + kan)
Aniga - kayga (qalinkan (this pen) waa (is) kayga (mine))
Adiga - kaaga
Isaga - kiisa
Iyada - keeda
Anaga - keena
Idinka - kiina
Iyaga - kooda
Inaga - keena
Tirada Dadka ku hadla Af-Soomaaliga
Tirada dhabta ee dadka ku hadla Af-soomaaliga lama yaqaan, waxaase lagu qiyaasaa ilaa 19.65 Milyan oo qof kuwaas oo ku kala firarsan Caalamka, waxaana kaloo jira aragtiyo kale oo gaarsiiya ilaa 25 Milyan oo qof.
terre dhulka terra ارض
ciel cirka cielo سماء
eau biyo acqua ماء
gens dad popolo الناس
garçon lab maschio ذكر
fille naag femmine الإناث
homme nin uomo رجل
femmes dumar donne نساء
manger cun mangiare أكل
je mange waan cunayaa io mangio أنا آكل
boire cab bevi شرب
je bois waan cabayaa io bevo أشرب
grand wayn grande عظيم
petit yar piccolo صغير
nuit habeen sera/notte ليل
jour maalin giorno يوم
Meelaha lagaga hadlo
iyo sidoo kale waddamada caalamka oo dhan, afka soomaaliga waxaa kale oo ku hadlo dad badan oo asal ahaan soomaali eheen, qaarkood weeba ku heesaan. somali - english - turkish aniga - I - ben adiga - you - sen isaga - he - o iyada - she - o anaga - we - biz adinka - you - siz iyaga - they - onlar. qaybaha falalka(ficilada) soomaaaliga: kuwo ku dhamaado ..-id,..-asho,..-aansho,..-n sida afka soomaaliga hadaan tusaalooyin ka bixino: fal dhacay (aniga
Lahjadaha looga hadlo Soomaaliya
↑ Constitution of the Republic of Somaliland, November 10, 2019
↑ Lewis, I. (1998). Peoples of the Horn of Africa: Somali, Afar and Saho. Red Sea Press|1998|
↑ Saciid, John (1999). Soomaali . Amsterdam: John Benjaminamiiniyada.
↑ Somali, SIL International, 2013
↑ The Federal Republic of Somalia - Provisional Constitution Archived Jannaayo 24, 2013 // Wayback Machine
↑ Kizitus Mpoche, Tennu Mbuh, eds., Language, literature, and identity, 2006, Cuvillier
↑ Ethnologue - Djibouti
↑ Afka Soomaaliga
↑ Regional Somali Language Academy Launched in Djibouti COMESA Regional Investment Agency, 28 February 2014, Nuqul Archive
↑ Google Translate - now in 80 languages, Google Translate, 10 December 2013
↑ Map of Somali dialects in the Somalia Democratic Republic, Lamberti Marcello, 1986, H. Buske
↑ Mundus, Volumes 23-24 Wissenschaftliche Verl. 1987
↑ Bardera Polytechnic Languages Department Nuqul Archive
↑ hab qorka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af_Soomaali&oldid=223142"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Nofeembar 2021, marka ee eheed 13:45.